ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး အရုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ အကအဖွဲ့ များပြားလာ?? - Yangon Media Group
”ဒီပွဲရဲ့ထူးခြားချက်က အရုဏ်တော်ဝတ် အဖွဲ့သားများဟာ စစ်ကိုင်းမြို့ကနေ ကောင်း မှုတော်ဘုရားအထိ ၅ မိုင်ခရီး ကတ္တရာလမ်းမ ကြီးအတိုင်း နေပူထဲမှာ တစ်နေကုန် ဖိနပ်မစီး ဘဲ လမ်းလျှောက်သွားကြတာပါပဲ။ မနက် ၆ နာရီကျော်ထွက်တဲ့ အစောဆုံးအသင်းက ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးကို ညနေ ၄ နာရီ ကျော် ၅ နာရီမှ ရောက်ပါတယ်။ တချို့အသင်း တွေက ည ၇ နာရီလောက်မှ ဘုရားကြီးရင်ပြင် တော်ပေါ် ရောက်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အရုဏ်တော် အကအဖွဲ့အားလုံးနီးပါး မြန်မာ့ရိုးရာအက တွေ ဖျော်ဖြေတာ တွေ့ရတာကတော့ အထူး ခြားဆုံးပြောင်းလဲလာမှုလို့ ပြောချင်ပါတယ်”ဟု မိုးဇာရပ်ကွက် အရုဏ်တော်ဝတ်အသင်းမှ ဦးသိန်းဝေက ပြောသည်။
ဖိအားများနေသော နည်းပြလိုပီတီဂွီကို ရာမို့စ် ထောက်ခံ
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း မန္တလေး-ညောင်ဦးရေလမ်း၌ ရေယာဉ်များ ဘေးကင်းစွာ သွားလာနိုင်ရန် ရေလမ်းပြ အမှ??